Samsung dia nanambara ny fakan-tsarimihetsika ISOCELL GN1 vaovao | Androidsis
Samsung dia manambara ny fakan-tsarimihetsika fakantsary 50MP vaovao miaraka amin'ny autofocus pixel roa
Hita ho avy fa hanambara i Samsung fakan-tsary fakan-tsary 50MP vaovao miaraka amin'ny autofocus pixel roa. Izany tokoa, ary ora roa lasa izay dia nandray ny feo izy mba hanambarana ity sensor vaovao ity.
Miresaka momba izany isika Fakan-tsary fakan-tsary ISOCELL GN1 misy piksel bebe kokoa, mekanisma autofocus haingana kokoa ary fanohanana ny fandraisam-peo 8K. Fitaovana vaovao izay ho hitantsika tsy ho ela amin'ny ambaratonga farany ambony an'ny orinasa.
El ISOCELL GN1 dia sensor fakantsary 1 / 1.3 mirefy misy vahaolana 50MP. Miresaka momba ny sary sensor voalohany avy amin'ny orinasa Koreana Tatsimo izahay mba hampidirana ny autofocus pixel roa sy ny binetran'ny pixel Tetracell. Raha ny marina dia nanambara i Samsung fa ny haben'ny pixel misy ny 1.2μm dia azo ovaina ho 2.4μm amin'ny alàlan'ny fampiasana ny teknolojia Tetracell hanatsarana be ireo sary maivana.
Ity sensor fakantsary vaovao ity dia miavaka amin'ireo ivon-toerany miisa 100 tapitrisa ho an'ny autofocus haingam-pandeha amin'ny toetr'andro maivana. Ny photodiode roa dia apetraka mifanila isaky ny pixel, mba hahafahan'izy ireo mahazo hazavana amin'ny zoro samihafa hampiasaina amin'ny fizahana dingana.
Raha miresaka ny maody fanaovana doka pixel, ny sensor ISOCELL GN1 dia mahay maka sary 12.5MP misy piksel 2.4μm hanatsara ny sary maivana; iray amin'ireo sahan'ady ankehitriny eo amin'ny sehatry ny sary avy amin'ny finday. Raha ny marina, ny algorithmanany dia manolotra fomba mamela ny fakana sary 100MP amin'ny fampiasana ny sensor 50Mp.
Ny endri-javatra hafa an'ity sensor ity dia misy Smart ISO, EIS miorina amin'ny gyro ary fandraketana horonantsary hatramin'ny 8K amin'ny 30FPS. Izy io koa dia ahafahanao mirakitra horonantsary amin'ny 240fps miaraka amin'ny autofocus sy 400fps tsy misy autofocus.
Ity vaovao ity Ny sensor ISOCELL GN1 dia hiditra amin'ny famokarana betsaka amin'ity volana ity ka amin'ny faran'ny taona ity dia tonga amin'ny smartphone vaovao an'ny orinasa. 9 volana lasa izay raha nanana vaovao farany momba ny iray hafa isika vaovao sensor Samsung.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Samsung dia manambara ny fakan-tsarimihetsika fakantsary 50MP vaovao miaraka amin'ny autofocus pixel roa
Honor V6 Tablet: takelaka vaovao misy tontonana 2K sy fifandraisana 5G